Delta Mhepo Lines uye LATAM kuvhura codeshare muColombia, Ecuador nePeru
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Delta Mhepo Lines uye LATAM kuvhura codeshare muColombia, Ecuador nePeru
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEcuador • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Panama News • Kuputsa Peru News • Kuputsa Kufamba Nhau • Kuputsa US News • Bhizinesi Kufamba • Colombia Breaking News • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Delta Air uye LATAM ichatanga codeshare yendege dzinoshandiswa nedzimwe nhengo dzeLATAM muColombia, Ecuador nePeru kutanga mukota yekutanga ya2020, zvichimirira kugamuchirwa kwemvumo yehurumende.
Iyo codeshare ichapa vatengi kuwedzera kubatana pakati peanosvika makumi manomwe nemanomwe mafambiro ekuenda kuUnited States uye anosvika makumi mashanu neshanu kuenda kuSouth America.
Delta inotarisira kuwedzera mikana yemakodhi yekubatanidza dzimwe nzvimbo munguva pfupi inotevera. Airlines arikushandawo kuunza kazhinji purogiramu yekudzokororazve uye kudzokorodza nzvimbo yekutandarira.
"Iri idanho rakakosha kune vatengi patinotanga kuunza pahukama hwekushandura pakati peDelta neLATAM yakaziviswa kutanga kwegore rino," akadaro Steve Sear, Mutungamiri weDelta - Wepasi rose uye Executive Mutevedzeri weMutungamiri - Global Sales. "Kana zvangoonekwa zvizere, kudyidzana uku kuchatipa kugona kupa vatengi vedu zvakagovaniswa indasitiri inotungamira indasitiri uye nebasa repamusoro muAmerican."
MunaGunyana, Delta neLATAM vakazivisa chibvumirano icho chichaunza pamwe chete ndege dzinotungamira muNorth nekuSouth America, iyo yakazadzikiswa zvizere ichapa zvakanyanya nzira dzekufambisa dzevatengi vanokwanisa kuwana 435 nzvimbo dzepasirese. Kubatana kwakasimudzirwa kunoenderana nekutenderwa nehurumende.